Tantara Mahasondriana Amin’ny Tantaran’ny Volan’i Colombia Amin’ny Tarehintsoratra 140 Na Latsak’izany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Mey 2016 10:42 GMT
Vakio amin'ny teny русский, English, Ελληνικά, नेपाली, Español
Sary nalaina avy amin’ity sioka ity avy amin'i @MonedasColombia.
Mpiondana niomismatika, fantatra ihany koa amin'ny fianarana na fanangonana karazam-bola ve ianao? Raha eny ny valiny dia iray amin'ny mendrika arahana ny kaonty Twitter Monedas de Colombia (Vola Kolombiana).
Avy ao an-tanànan'i Bucaramanga ny tompon'ny kaonty izay manana mpanjohy mihoatra ny 7000, misioka zavamisy ara-tantara amin'ny teny espaniola momba ny vola vy sy ny vola taratasy avy ao amin'io firenena ao Amerika Atsimo io.
Araka ny nolazain'ny Fikambanana Iraisampirenena Misahana ny Raharaham-Bola, ny vola vy kolombiana no vola tsara tarehy indrindra teto ambonin'ny tany tamin'ny 2013.
vola vy 500 peso iray ho fahatsiarovana ny Hazon'i Guacarí sy ny ezaka nataon'ny monisipalite hiarovana azy. Tamin'ny 1989 izy io no nidaboka. [Andron'ny Hazo]
Fanampin'izany dia mamoaka zavamisy momba ireo vola vy sy vola taratasy avy amin'ny firenena hafa manerana izao tontolo izao ihany koa i kaonty azon'ny rehetra jerena io. Na izany aza ny tena ifantohany dia ireo angona Kolombiana, natonta sy navoaka teo amin'ny tantaran'ny firenena.
Vakimbola ampinga filamatra 2 natonta tamin'ny 1627 tao amin'ny “Casa de Moneda” (fanontam-bola) tao Bogota. Vola natonta vita amin'ny volamena voalohany tao Amerika
Alika natao ho sarin'ny vola taratasy 25 navoakan'ny Banky Nasionaly Kolombiana tamin'ny 1895.
Tahaka izany ihany, mizara antsimpirihan-javatra mahavariana ny mpanangona karazam-bola sy ny manampahaizana ihany koa ny kaonty:
Tao Bogota i Fidel Castro nandritra ny #Bogotazo [rotaka goavana niteraka fahapotehan'ny ampahany amin'ny tanàna] tamin'ny 9 Avrily 1948. Misy milaza fa hita ao amin'ny vola taratasy 1000 peso izy.
Afa-manjohy ny kaonty ao amin'ny Facebook ihany koa ianao. Mahafantatra kaonty hafa mitovy amin'ity avy amin'ny firenen-kafa ve ianao? Zarao aminay ireny!